ဂေဇက်ရွာမှ ကိုဗိုက်ကလေးအရက် ဖြတ်ပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂေဇက်ရွာမှ ကိုဗိုက်ကလေးအရက် ဖြတ်ပုံ
ဂေဇက်ရွာမှ ကိုဗိုက်ကလေးအရက် ဖြတ်ပုံ
Posted by ေဇာက္ ထိုး on May 21, 2012 in Copy/Paste |9comments
ကိုဗိုက်ကလေးပြန်သွာလို့သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကိုဗိုက်ကလေး အိပ်ဆေးတွေ သောက်ပြီးမထလို့ ဆိုပြီး ရုပ်ရုပ်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
(မိဘမရှိလို့ ဘုန်းကြီးမှမွေးထားပြီး ကျောင်းတက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မောင်ကံကောင်းမှ ကျောင်းကြီးပေါ်သို့ကဗျာကယာ ပြေးတက်လာပါသည်။)
“ဟဲ့ မောင်ကံကောင်း ဘာဖြစ်လာတာလဲ…..”
“ကိုဗိုက်ကလေး ကျောင်းကအပြန် အိပ်ဆေးတွေသောက်လို့လို့ကြားပါ တယ်ဘုရား…..ရွာရဲ့ကျန်းမာရေးမှူးကတော့ ရောက်နေခဲ့ပါပြီဘုရား။ မစိုး ရိမ်ရတော့ဘူးလိ်ု့လဲ ပြောလိုက်ပါတယ်ဘုရား။”
“….ဟဲ..ဗိုက်ကလေးဘာဖြစ်တာလဲ။ ကျောင်းကပြန်သွားတာ မကြာသေးပါ ဘူး။…..”
“….ဘုန်းဘုန်းပဲ အရက်ပြတ်အောင် အရက်သောက်ချင်တဲ့စိတ်ကို နိုင်အောင် လုပ်ရမှာဆိုလို့ တပည့်တော်က အိပ်ဆေးသောက် အိပ်နေရင်တော့ အရက် သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ ဘူးလို့စိတ်ကူးပြီး ခုလိုသောက်လိုက် တာပါဘုရား…..”
“ဟဲ့ဗိုက်ကလေးရဲ့…အိပ်ဆေးသောက်နေလို့ အရက်သောက်ချင်စိတ်မဖြစ် တာက သောက်ချင်စိတ်ကိုအအိပ်ခိုင်းထားလို့ပဲ။ မအိပ်တဲ့အခါကျတော့ ပြန်သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့။အိပ်ယာကနိုးရင်ပြန်သောက်ချင်မှာပေါ့။
ဒေါသမထွက်အောင် အိပ်ဆေးသောက်အိပ်နေရင် ဘယ်ဒေါသထွက်မှာလဲ။ ဒါပေမယ့် အိပ်ရာက နီုုးရင်ဒေါသကပြန်ထွက်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီနည်း ကိုအမြဲသုံးရင် သေချာပေါက်လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်မှာနော်။
ကိုယ့်စိတ်ကို အအိပ်ခိုင်းထားလို့….ကိုယ့်စိတ်ကို အမေ့ခိုင်းထားလို့…. ကိုယ်စိတ်ကို ချုပ်ထိမ်းထားလို့…..မထွက်တဲ့ဒေါသက အမှန်မထွက်တာ ဟုတ်ပါ့မလား။ ဒေါသမကောင်းမှန်းသိလို့ မထွက်တဲ့ဒေါသ။အရက်မ ကောင်းမှန်သိမြင်လို့ အရက်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိလို့ သောက်ချင်စိတ်ကုန်သွားတာ မျိုးကမှ အမှန်မသောက်ချင်မှာပေါ့။ အဲဒီအရက်ရဲ့ ဒုက္ခတွေကိုလဲ အမြဲသိ မြင်နေအောင်လဲ ပွားများမှုလုပ်နေရမှာပေါ့။ အဲဒီလိုပွားနေမှ အသိအမြင်တွေ များလားပြီးလူကိုအကျိုးများမှာပေါ့။ အိပ်နေရင်…စိတ်ကိုချုပ်တည်းထားရင် ဘယ်လိုလုပ် အရက်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရမှာလဲ။
သစ္စာလေးပါးမှာ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကိုက ….ဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်ရမှာလို့ ဘုန်းဘုန်းပြောလိုက်တယ်လေ။ ဒို့ဘုရားရဲ့ တရားက ဒုက္ခက လွတ်ဖို့ဟဲ့။ ဘယ်ဒုက္ခက လွတ်ချင်လွတ်ချင်…ကျင့်ရမှာက တစ်ခုထဲပဲ ..အဲဒါ ဒုက္ခကို သိအောင်လုပ်ဖို့ပဲ။ ဒုက္ခသစ္စာကိုက သိရမယ့်သစ္စာလို့ဆိုတယ်ကွဲ့။ မေ့နေဖို့ မေ့ထားဖို့မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ ဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ သမ္မာဒိဋ္ဌိ..သမ္မာသင်္ကပ္ပ..ဆိုတဲ့ အသိမှန်…အမြင်မှန်တွေနဲ့ လုပ်ရမှာနော်။ အသိမှား အမြင်မှားတွေနဲ့ဒုက္ခကိုသိလို့ကတော့ ပိုဒုက္ခရောက်သွားမယ်။
အိပ်ဆေးသောက်အိပ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ဒုက္ခကိုသိမြင်တော့မှာလဲ။ ဒုက္ခက လွတ်မြောက်ဖို့ ကျင့်ရမယ့်မဂ္ဂင်လမ်းစဉ် ရှစ်ခုကိုလဲပြန်ကြည့်တော့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်အောင်..မှန်မှန်ကန်ကန် တွေးမြင်ရ မယ်လို့ ဆိုတာမဟုတ်လား။ ဒုက္ခတွေက လွတ်မြောက်ဖို့ လျှောက်လှမ်း မယ့် လမ်းစဉ် ၈=ခုမှာ ရှေ့ဆုံးကထုတ်ပြထားတာကိုက မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်ဖို့နဲ့ မှန်မှန်စဉ်းစားတွေးတော သိဖို့ပဲ။ အဲဒီနှစ်ခု မပါတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာ အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ…အသိမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်မှာပဲ။
ခု…မောင်ဗိုက် အိပ်ဆေးသောက်အိပ်တော့ ဘယ်လိုလုပ် မှန်မှန်ကန်ကန်မြင် လို့က ရမှာလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်အိပ်ပျော်နေတော့ မှန်မှန်ကန်ကန် တွေးလို့ ရမှာလဲ။ စိတ်ညစ်လို့ အရက်သောက်။ မူးတုန်းတော့မေ့နေလို့ စိတ်ညစ် ပျောက်သလိုရှိပေမယ့် အမူးပျောက်တော့ စိတ်ညစ်စရာက ပျောက်သွားတာ မဟုတ်တော့ ပြန်စိတ်ညစ်ရတာပဲ။
အဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ဖို့….မှန်မှန်ကန်ကန် တွေးတတ်ဖို့ဆိုရင်…စိတ်ဆို တာ ကြံစည်စိတ်ကူးနေရမှာနော်….စိတ်က မကူးတော့ရင်…မင်းရဲ့စိတ်က ဘယ်နှံ့တော့မှာလဲ…….မင်းစိတ်က မနှံ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့…….. ……..စိတ်မနှံ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
ဒို့ဗမာတွေ….ခေတ်နောက်ကျန်နေခြင်းရဲ့ အဓိက အချက်ဟာ မြန်မာတွေ မစဉ်းစားကြလို့…မြန်မာတွေ ဦးနှောက်မသုံးကြလို့….လို့ပညာရှင်တွေ ခဏခဏ ပြောနေတဲ့ကြားထဲက ဗိုက်ကလေးရယ်…မစဉ်းစားပဲနဲ့ စဉ်းစား တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကို အအိပ်တောင်ခိုင်းမလို့တဲ့……….ငါနှယ်ကွယ်… အိပ်ယာကနိုးလိုက်…အိပ်ဆေးထပ်သောက်အိပ်လိုက်….အိပ်ယာက နိုးလိုက်..အိပ်ဆေးထပ်သောက် အိပ်လိုက် .ဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်ပါလား.. …. .. မင်း မသေခဲ့ရင်တောင် ရပ်အကြောင်း… .ရွာအကြောင်…. လူအကြောင်း … . စီးပွားရေးအကြောင်း…. ကြီးပွားရေးအကြောင်း…. သားအကြောင်း…မယားအကြောင်း ဘာမှမသိတဲ့ သူဖြစ်သွားမှာပေါ့ ငါ့ဒကာဗိုက်ရဲ့…….
ဒါကြောင့် အရက်ဒုက္ခက လွတ်မြောက်အောင်….အရက်မသောက်နဲ့။ အရက်မသောက်ဖြစ်အောင် အရက်သောက်ချင်စိတ်ကိုနိုင်အောင်လုပ်ရမယ် အရက်သောက်ချင်စိတ်နိုင်အောင်ကလဲ…အရက်ဒုက္ခကိုပဲသိအောင်လုပ်ရ မှာ။ အဲဒီလိုသိဖို့ရာကလဲ စိတ်ကိုထိမ်းချုပ်ဖိနှိပ်အအိပ်ခိုင်းထားလို့ကတော့ ဘယ်လိုမှ မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်လို့မရဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ဖို့က မှန်မှန် ကန်ကန် တွေးတောတတ်ရမယ်။ အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပြီး အမြဲလဲ သတိထားနေရမယ်။ အရက်ကို ဖြတ်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကို ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲမသွားတဲ့အထိ ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိရတဲ့အထိ ကြိုးစား ရမယ်။ အခုအရက်ဖြတ်ချင်လိုက်…အခုမဖြတ်ချင်လိုက်ဆိုပြီး ကိုယ်စိတ်က သမာဓိ တည်ငြိမ်မှု မရှိဘူးဆိုရင်တော့ အရက်ဖြတ်မှု အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ”
“မှန်ပါ တပည့်တော် သဘောပေါက်သွားပါပြီဘုရား……”
“မသေတော့ပါဘူး ကိုဗိုက်ကလေးရယ်….အမလေး ခုမှကြောက်နေလိုက် တာ…..”.
“သေမှာကြောက်လို့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ….ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးစာရင်းအရဆိုရင် ကျွန်တော်တာဝန်တွေ ကျန်သေး တယ်လို့ခံစားရလို့ပါဗျာ…….”
“ဗိုက်ကလေးနော်…..ဦးပေ မပြောလိုက်ချင်ဘူး…ငါဆရာတော်ရှေ့မှာမို့ပေါ့ ကွာ…..ဟင်….လုပ်လိုက်မှဖြင့် အရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းချည်းပဲ””
“ကဲ … သူကြီးတို့ ဒကာပေတို့ ဘုန်ကြီးပြန်ဦးမယ်။ ကျောင်းမှာက ဘုန်းကြီးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနေတာ…ဒကာမိုးက စောင့်နေမှာကွဲ…….”
မှတ်ချက်=ဗုဒ္ဓရဲ့ ကျင့်စဉ်မှန်လျှင် မဂ္ဂင် ၈=ပါးကလုံးဝလွတ်ခွတ်မရှိ။ မဂ္ဂင် ရှစ်ပါးတွင်…သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပ= အမြင်မှန်ဖို့ အမြင်မှန်အောင်တွေး တတ်ဖို့သည် ရှေ့ဆုံးမှပြ၏။ မည်သည့်ဒုက္ခမှဖြစ်စေ..ဒုက္ခကလွတ်မြောက် လိုလျှင်..ယင်းဒုက္ခကို သိအောင်လုပ်ခြင်းသည် အဓိက ဖြစ်၏။ ဒုက္ခသစ္စာ သည် သိအောင်လုပ်ရမည့်သစ္စာဖြစ်၏။
လူနာမှာ ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာရလျှင် (သို့မဟုတ်..ကြီးမားသော ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်လိုလျှင်)မေ့ဆေး..ထုံဆေးသည် ခေတ္တသက်သာရန် ကောင်းပါ၏။ အသုံးဝင်ပါ ၏။ သို့သော် မေ့ဆေး..ထုံဆေးသည် ရောဂါကိုအမှန်ပျောက် ကင်းစေသော ဆေးဝါးမဟုတ်။ အရေးတကြီးခံစားမှု သက်သာရန်အတွက် သာဖြစ်၏။ တချိုု့အသေးအမွားခွဲစိတ်မှု..အနည်းငယ်ရောဂါများအတွက် မေ့ဆေးမသုံးပဲ..ကုသသည်က ပိုကောင်းသည်ဟု ဆရာဝန်များကဆို၏။
သမာဓိရှိမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို မေ့နေခဲ့ပြီး အရာရာကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်ခွင့် ရပါလို၏ လို့ အမြဲဆုတောင်းခဲ့တယ် ။
တားတားကို ဘီအီးပဲ လှိမ့်ဖြတ်ခိုင်းနေတော့ဒါဘဲ..တောက်နေရရင် ကျေနပ်ဘာဒယ်ချိုမှ ဂျွတ်..အဲ..ဇွတ်..
အရက်သောက်ခြင်းကို ဒုက္ခလို ့မသိမမြင်နိုင်သရွေ ့..ဆက်သောက်နေမိဦးမှာပါလားနော်..
အရက်ဆိုတာ..ငွေကုန်၊အချိန်ကုန်၊မူးရင်တလွဲလုပ်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါကလားနော်..
မှတ်ချက်။ ။အရက်ဖြတ်ထားသော အူးဗိုက်အား အူးပေမှ လာရောက်ဖြတ်ဆီးခြင်း သမှု အလျင်းမပြုရ။
မနေ ့ညက ဦးပေ ဘီယာသောက်နေတယ်ဗျ။ကိုရင် ဗိုက်ရ
ဆရာပေကိုလဲ ဘီယာပြတ်အောင် တရားဟောပါဦး..
ကျောက်ကလေးအောင်လိုက် ဘောပွဲလေး နိုင်လိုက်ဆိုတော့
ဘီယာလေးစုပ်၊မာဆတ်လေးသွားနဲ့ငွေတွေကို တလွဲသုံးနေတာ ကြာပေါ့ဗျာ..
နေအုံး အူးအူးဗိုက်ရေ. ကိုပေကတော့ နှစ်ရက်.က် ဘောပွဲ မိုင်းနင်းနေပီ။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဘိုင်ယန်တဲ့၊မနေ့ညက ဂျူပီ တဲ့။ကွဲပီဗျ။
ကျောက်သထေးတစ်ယောက်အတွက် ဘောတစ်ပွဲရှုံးတာ ကွမ်းတစ်ယာ စီးကရက်တစ်ဗူးလောက် ကုန်တယ်လို ့ပဲ
အူးပေကို လျှော့မတွက်စမ်းပါနဲ ့
ရော့ ရော့ လို ့ရှိသမျှ ပေးပြီးသကာလ…
ပလုံပလုံ နဲ ့မျက်ရည်တွေ တောက်တောက်ကျခဲ့ရပါဘီ ကွယ်
ကိုပေ. ဘယ်သူ ့ယုံရမလဲဗျာ။အူးဗိုက်ကလဲ ကျောက်သူဌေးတဲ့ကြောနေပီ။
ကိုပေက မျက်ရည်လုံး ဗူးသီးလုံးလောက်ကျနေတယ်ဆိုတော့။ဟူးးးးးးးးးး